Dhagayso:- Waraysi:- Maxaa ka dhalan kara Xariga Madaxweynhii hore ee dowladda deegaanka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ? – Radio Daljir
Dhagayso:- Waraysi:- Maxaa ka dhalan kara Xariga Madaxweynhii hore ee dowladda deegaanka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ?
Agoosto 9, 2018 11:19 b 0
Madaxweynihii dowladd deegaanka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa lagu soo waramayaa in uu kujiro wali xabsi guri .
Waxaa socda wada hadalo udhexeeya dowladda Itoobiya ,xubno kasocday Beesha caalamka, iyo Madaxweyne Axmed Madoobe oo kusugan Adis-Ababa .
Dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada Dhagax-buur ayaa sheegaya in halkaasi ay isku horfadhiyaan ciidamada dowladda fadaraalka Itoobiya iyo kuwa Liyuu Booliska oo ka carooda Xariga Madaxweynihii hore .
Hadaba maxaa ka dhalan kara xariga Madaxweynihii hore iyo xisada ka taagan dowladd deeganka Itoobiya ?
Su,aalahaas iyo kuwo kale waxaan hor dhignay Siyaasi Maxamed Aden Yusuf oo ku Magac dheer (Dhagawey) , xilal Badana ka soo qabtay Dowladdii kacaanka ahayd ee Maxamed Siyaad Bare Allaha unaxariistee ,kana ka soo jeeda Deegaanada Kilinka Shanaad.
Wariye Xasan Heykal ayuu qadka telfoonka ugu waramay isagoo ku sugan dalka Mareykanka .